Taariikh nololeedkii Marxuun Nuur Faarax Xirsi | Togdheer News Network
Taariikh nololeedkii Marxuun Nuur Faarax Xirsi
Alle ha u naxaristee Nuur Faarax Xirsi Faahiye waxa uu ku dhashay Degmada X. Saalax ee gobolka Togdheer sannadkii 1961kii, halkaas ayuu ku barbaaray yaraantiisii oo lagaga daray malcaamad Qur’aan. Sidoo kale dugsigiisii hoose waxa uu ku qaatay isla degmada Xaaji Saalax. Ka dibna waxa uu Nuur u wareegay dhinaca magaalada Burco ee Gobalka Togdheer, halkaas oo uu ku qaatay qayb ka mid ah dugsigiisii dhexe, waxaanu ku dhammaystirtay qaybtii labaad gobolka waqooyi galbeed M/Madaxdiisa Hargaysa. Markii uu dhammaystay dugsigii dhexe waxa uu u wareegay magaalada muqdisho halkaas oo uu ku dhammaystay dugsigiisii sare .
Ka dibna waxa uu galay jaamacaddii Gahayr kuliyadii cilmiga siyaasada (politics),waxaanu ka qalin jabiyey 1987. Burburkii soomaaliya ka dib waxa uu ku soo laabtay gobolada waqooyi, waxaanu ku biiray dhaqdhaqaayadii nabad doonka ahaa ee xilligaas lagu heshiisiinaayey beelah soomaaliland. Waxaanu ka qayb galay shirkii Liibaan ee ka dhacay magaalada Sheekh sannadkii 1992kii, waxaanu ahaa Af-hayeenka shirkaas.
1993kii ayuu dalka Sudaan u tagay course waxbarasho oo cilmiga saxaafada ah. Halkaasna waxa uu ku sugnaa muddo sannad ah. Markii uu course-kii waxbarasho soo dhamaystay waxa uu dalka dib ugu soo laabatay dabayaaqadii sannadkii 1994kii. Intaa wixii ka danbeeyeyna waxa uu ku suntanaa astaanta nabada isagoo udub dhexaad u ahaa soo Af-jaridii dagaaladii foosha xumaa ee ku dhexmaraayey magaalada Burco beelihii iska soo horjeeday sannadadii u dhexeeyey 1995 illaa 1998kii, sidoo kale iyana waxa garab socday dagaaladaas shirir lagaga arrinsanaayey soo Af-jarista colaada sokeeye ee daba dheeratay. Shirarkaasina waxa ay ka kala dhaceen deegaanada Duruqsi iyo Beer sannadadii 1996 iyo 1997,shirarkaas ka dib waxa la soo Af-jaray colaadii ka socotay gobolka Togdheer. Intaas wixii ka dan beeyeyna waxa uu ahaa shakhsi firfircoon oo bulshada ka dhex muuqda.
2002kii waxa uu ka mid ahaa aas-aasayaashii urur siyaasadeedkii hadhay ee Sahan oo uu Maxamed Cabdi Gaboose gudoomiyaha ka haa.
2005tii ayuu hadana waxbarasho dib uga bilaabay dalka Malaysia waxaanu soo diyaariyey shahaadada sare ee cilmiga siyaasada iyo xidhiidhka caalamiga ah Masters Degree (international Relations ship) markii uu dhamaystayna dalka ayuu dib ugu soo laabtay.
2009 waxa uu Hargaysa ka furay Machad lagu baran jiray siyaasada iyo xidhiidhka caalamiga ah( international politics)machadkana waxa la odhan jiray Xaaji Af-qallooc. Waxa kale uu ahaa wadaad dhiga cilmiga shareecada Islaamka iyo daaciba, waxaanu kutubta ka dhigi jiray qaar ka mid ah masaajidii Muqdisho xilliyadii uu jaamacada ku jiray iyo, sidoo kale macaahidii ka jirtay gobolada waqooyi sannadadii udhexeeyey 1993 illaa 1999kii.
Bishii December ee sannadkii 2011 oo ku beegnayd waqtiyadii ay samaysmayeen urur siyaasadeedyadii isu-diiwangelinayay ka qayb-qaadashada doorashadii deegaanka, ayuu magaalada Burco ee Xarunta gobolka Togdheer ka aasaasay Urur siyaasadeedkii Gurmad oo uu gudoomiye ka ahaa.
Muddadii lagu guda jiray ololaha iyo Taageero-raadinta ururrada, hawl-gallada ururka Gurmad, ayaa ku koobnaa ama ku badnaa gobollada Bari ee dalka, Gaar ahaan magaalooyinka Burco, Ceerigaabo oo uu taageerayaal badan ku haystay, haseyeeshee waxa ka xoog-roonaaday siyaasiyiin ruug-caddaa oo ay isku beel ka soo jeedaan, kuwaas oo kala hoggaaminayey Ururradii Waddani iyo Umadda, taas oo u saamixi weyday in Ururkiisu ka soo gudbo Qiimeyntii Kala reebista ururrada Siyaasadda.
Ka dibna Nuur Faarax waxa uu tagay muqdisho dabayaaqadii sannadkii 2012 isaga oo ka cadhooday cadaalad daradii lagu sameeyey waxaana ka horeeyey guddoomiyihii urur siyaasadeedkii NDP Foosiya Yuusuf X. Aadan oo dhammaadkii Bishii October ee sannadkii 2012kii ka degtay magaalada Muqdisho, waqtigaas oo dalka Soomaaliya loo dooranaayey Madaxweyne Cusub.
Jan 21, 2013 MUqdisho Reysal-Wasaarihii xilligaas ee Soomaaliya Cabdi Faarax shirdoon Saacid ayaa Golaha Baarlamanka horgeeyey xubno ka mid ah Wasiirradii uu magacaabay si looga ansixiyo golaha hortiisa waxaan ka mid ahaa xubnahaas Shan Safiir oo Cusub
oo uu ku jiray Nuur Faarax Xirsi, waxaana loo magacaabay Nuur inuu noqdo Danjiraha Soomaaliya u fadhiisanaya Waddanka Malaysia.
Ka dibna waxa loo magacaabay Nuur Faarax Wasiirka Dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya xilligii Dawladii Reysal Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaake. Muddadaa uu xilka wasiirnimada hayey waxa u suurta gashay in uu dacwadii badda soomaaliya uu horgeeyo Maxkamada caalamiga ah ee Heeg iyadoo ay Kenyana arrinkaas aad uga qaylisay.
Nuur Faarax waxa lagu xasuustaa waxa uu ahaa Nin wadaad ah oo ehlu cubaado ah, nin cilmiga shareecada Islaamka iyo maadigaba yaqaana oo af-tahan ah,nin leh samir badan iyo duqaad oo himiladiisa ka midhadhiya, nin xigmad badan oo hal`adayg leh, waxa kale oo uu ahaa nin Soomaaliland iyo soomaaliya ba raad weyn oo taariikheed ku lahaa, hadii ay tahay dib u curashadii soomaaliland iyo dib u heshiisiintii beelaha wada dega soomaaliland inta ba. Sidoo kale isna waxa waxa ka qoray (Yuusuf Garaad Cumar) madaxii hore ee laanta Afka soomaaliga ee BBC-da oo iminkana ah Wasiirka Wasaarada Arrimaha debeda ee soomaaliya waxaanu ku sheegay qoraal gaaban oo uu ku faafiyey Baraha bulshada:-“ inuu Nuur ahaa nin ka dhowrsada caddaalad darro, musuqmaasuq iyo lunsasho hanti dadweyne. Si kale haddii aan u dhigo, Nuur wuxuu ahaa Wasiir u nool sida shaqaalihiisa.
Inta badan marka aan la sheekeysto ama aan la doodo, inkasta oo ay afkaartayadu inta badan isu dhoweyd, Nuur Faarax wuxuu ahaa nin aan ka kororsado xikmad diini ah, maahmaah, gabay ama eray af Soomaali ah oo igu cusub. Sidaa ay tahay wuxuu isu arkayay arday ay tahay in aqoontiisa sii kororsado.
Laba sanno ka hor inta aanuu noqon Wasiirka Dekedaha, Nuur wuxuu ahaa Diblomaasi sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Wuxuu ahaa Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kuala Lampur, Malaysia.
Wuxuu ahaa Danjiraha billaabay in uu doorbido oo uu ku lebbisto dharka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed marka laga guddoomayo waraaqaha aqoonsiga Danjirennimo”.
Inaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun Nuur waxa uu ku geeriyooday Isbitaal Digfeer ee magaalada Muqdisho oo uu in muddo ah ku xanuunsanaa habeenkii Axada ee ay taariikhdu ahayd 2-04-2017 isagoo weli aan wareejin Xilkii wasaarradiisa. Sidoo kale waxa uu ifka kaga tagay xaas iyo 7 caruur ah oo iskugu jira 4 wiil iyo 3 hablood Inaa hilaali waa inaa ilayhi raajicuun. Waxa aan halkan Tacsi uga dirayaa qoyska iyo ehelka uu ka geeriyooday. Alle waxaan uga baryayaa in uu samir iyo Iimaan saadiq ah ka siiyo.
Nuur Faarax waxaan Rabbi uga baryayaa naxariista Jannatul Fidoosa. Adiguna fadlan u soo duceeya